The St.Regis San Francisco မှထူးခြားသော“ Take Flight” အထုပ်အသစ်ကိုကြေငြာသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ဟိုတယ် & အပန်းဖြေသတင်းများ » The St.Regis San Francisco မှထူးခြားသော“ Take Flight” အထုပ်အသစ်ကိုကြေငြာသည်
အချက်အပြုတ် • ယဉျကြေးမှု • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ • ဇိမ်ခံသတင်းများ • အစည်းအဝေးတွေ • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • USA မှ Breaking News • သတင်းမျိုးစုံ
စိန့် Regis ဆန်ဖရန်စစ္စကို
The St.Regis San Francisco သည်ဇိမ်ခံနေရာများ၊ ယဉ်ကျေးပျူငှာသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်တိုင်းကြော့ရှင်းမှုတို့အတွက်မြို့၏ပထမ ဦး ဆုံးလိပ်စာဖြစ်ပြီးခရီးသွားများနှင့်ဒေသခံများအတွက်သာယာလှပသော Napa Valley ၌ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများအပြင်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများကိုကမ်းလှမ်းသောအထုပ်အသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာခဲ့သည်။
ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏ပထမတန်းစားဇိမ်ခံပစ္စည်းသည် BRION နှင့် Napa Valley Aloft တွင်ထူးခြားသော Napa Valley အတွေ့အကြုံများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျတည်းခိုနိုင်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအထုပ်သစ်ကို“ ပျံသန်းခြင်း” ဟုခေါ်သည်။
ဤဇိမ်ခံအထုပ်တွင် chauffeured သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အံဝင်ခွင်ကျအချက်အပြုတ်မွေ့လျော်မှုများနှင့်သီးသန့်လေပူဖောင်းစီးခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အိမ်ရာ၏“ Take Flight” အထုပ်အသစ်တွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်နှစ်ညတည်းခိုခွင့်ပါ ၀ င်သည် စိန့် Regis ဆန်ဖရန်စစ္စကိုNapa Valley မှနှင့် Napa Valley သို့၊ ကိုယ်ပိုင်ဇိမ်ခံ sedan သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ဇိမ်ခံ Metropolitan suite များ၊ ဘာလီကျွန်း ကြော့ရှင်းသော St. Regis နံနက်စာသုံးပျော်ပွဲစားအတွေ့အကြုံ၊ သီးသန့်မီးပုံပျံမီးပုံးပျံစီးခြင်း Napa တောင်ကြားNapa ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဇိမ်ခံဝိုင်အိမ်ရာတွင်ကိုယ်ပိုင်၊ အလွန်စိတ်ကြိုက်အရသာရှိသောအတွေ့အကြုံ၊ BRION
“ The St.Regis San Francisco သည် San Francisco ၏သွက်လက်သောမြို့လယ်ခေါင်အနုပညာ၊ အချက်အပြုတ်နှင့်ညဥ့်ယဉ်ကျေးမှုအပြင်သဘာဝအလှတရား၊ ဝိုင်ကောင်းကောင်းနှင့် Napa Valley ၏ငြိမ်သက်မှုကိုခံစားလိုသောခရီးသွားများအတွက်အထူးတည်ရှိသည်။ ဟိုတယ်အတွက် “ ဒီနာမည်ကျော် Napa Valley စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဧည့်သည်တွေကို“ မြို့” နဲ့“ နိုင်ငံ” နှစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတွေပေးဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တယ်။
“ Take Flight” အထုပ်ကို ၀ ယ်ယူထားသည့်ဧည့်သည်များသည် San Francisco ၌ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ပုံစံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့နှင့်အတူနေထိုင်မှုကိုစတင်လိမ့်မည်။ The St.Regis San Francisco ကိုရောက်တာနဲ့သူတို့ကဟိုတယ်ရဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်တွေထဲကတစ်ခု၊ အပန်းဖြေအိမ်ခန်းရဲ့ understated sophistication ကိုနှစ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့နှစ်မြှုပ်မှုကိုခံစားရစေမယ့်ပိုင်ဆိုင်မှု Les Clefs d'Or concierge အဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်။ SOMA (စျေးလမ်း၏တောင်ဘက်) ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တည်ရှိသောအလွန်အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အနုပညာအဖွဲ့အစည်းများ
နောက်နေ့နံနက်စောစောတွင်ရာနှင့်ချီသောသာယာသောတောင်စပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့်ကမ္ဘာကျော်ဝိုင်ဒေသတို့ကြောင့်ကျော်ကြားသော Napa Valley သို့ဧည့်သည်များကိုပို့ဆောင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေလိမ့်မည်။ နေ့၏ပထမဆုံးမှတ်တိုင်သည်သမိုင်းဝင်နေရာ၌တည်ရှိသော Napa Valley Aloft ဖြစ်သည် Yountville အိမ်ယာမရ။ နေထွက်ချိန်တွင်ဧည့်သည်များသည်ကိုယ်ပိုင်မီးပုံးပျံစီးနင်းပြီးဧရိယာ၏အထင်ကရရှုခင်းထက်အမြင့်သို့တက်လိမ့်မည်။ ဆင်းသက်သောအခါသူတို့သည် St. Regis အချက်အပြုတ်အဖွဲ့မှအထူးပြင်ဆင်ထားသောပျော်ပွဲစားနံနက်စာကိုခံစားကြလိမ့်မည်။
ထို့နောက်ဧည့်သည်များသည် Yountville မြို့တောင်ဘက်ရှိလေးစားစရာကောင်းသော Sleeping Lady Vineyard ပေါ်တွင်တည်ရှိသော Brion Wise ၏အထင်ကရ Napa Valley winery မှ BRION သို့ ဦး တည်လိမ့်မည်။ Napa Valley နှင့် Sonoma ရှိထူးခြားသောစပျစ်ခြံများမှတစ်မူထူးခြားသောစပျစ်ခြံနေရာများမှလက်လုပ်စပျစ်ဝိုင်အသေးများစုဆောင်းခြင်းဖြင့် Mr. Wise ၏စံပြဝိုင်များကိုစုဆောင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ရည်စူး၍ Mr. Wise ၏စိတ်ကူးများကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်ဧည့်သည်များသည် St. ဆန်ဖရန်စစ္စကို။
The St.Regis San Francisco သည်အခန်း ၂၆၀ နှင့်အခန်းများကိုမကြာသေးမီက Toronto အခြေစိုက်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ Chapi Chapo မှပြန်လည်စိတ်ကူးထားသည်။ Theredesign သည်စကားဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်သန့်စင်ပြီးသက်တောင့်သက်သာနှင့်ဆန်းသစ်သောဧရိယာများဖန်တီးခြင်း၊ St.
“ Take Flight” အထုပ်အတွက်စျေးနှုန်းသည် ၁၂,၉၈၅.၀၀ ဒေါ်လာမှစတင်သည်။ ဘွတ်ကင်အတွက် ၁၄ ရက်ကြိုတင်သတိပေးချက်လိုအပ်သည်၊ ထိုအချိန်၌ပြန်အမ်းငွေမပြည့်ပါကကြိုတင်ငွေပေးချေရလိမ့်မည်။ မီးပျက်မည့်ရက်များကိုလျှောက်ထားပါ၊ ကြိုတင်မှာယူမှုများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၀ မှယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ကြိုတင်မှာယူမှုများ (သို့) စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါကဟိုတယ်၏ကြိုတင်မှာယူမှုဌာနကို ၄၁၅၊၂၈၄၊၄၀၀၉ သို့ဆက်သွယ်ပါ။
The St. Regis San Francisco အကြောင်း
စိန့် Regis ဆန်ဖရန်စစ္စကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောဇိမ်ခံဆန်သော၊ ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်နှင့်ခေတ်မမီသောကြော့ရှင်းမှုအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Skidmore, Owings & Merrill မှဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအထပ် ၄၀ ရှိအထင်ကရအဆောက်အ ဦး တွင်အခန်း ၂၆၀ ရှိသော St. Toronto ၏ Chapi Chapo မှဒဏ္legendaryာရီ butler ၀ န်ဆောင်မှုမှကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသောဧည့်သည်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်ပေးခြင်းမှ Toronto ၏ Chapi Chapo မှဇိမ်ခံပစ္စည်းများနှင့်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းများသည် The St. St.Regis San Francisco သည် 2005 Third Street တွင်တည်ရှိသည်။ တယ်လီဖုန်း: ၄၁၅.၂၈၄.၄၀၀၀
Linda Hohnholz, eTN အယ်ဒီတာ
Linda Hohnholz သည်သူမအလုပ်လုပ်သည့်အချိန်ကတည်းကဆောင်းပါးများကိုရေးသားပြီးတည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဤပင်ကိုစိတ်အားထက်သန်မှုကို Hawaii Pacific University၊ Chaminade တက္ကသိုလ်၊ ဟာဝိုင်ယီကလေးများရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစင်တာနှင့်ယခု TravelNewsGroup စသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
St Kitts and Nevis ပစ်မှတ်လူ ဦး ရေ၏ ၇၅% သည်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည်
ဆိုက်ပရပ်စ်သည်၎င်းတို့၏ Golden Visa အတွက်နိုင်ငံခြားသား ၄၅ ဦး ကိုထုတ်ပယ်လိုက်သည်။
Aeromexico သည်၎င်း၏အခန်း ၁၁ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ပြသည်
နော်ဝေနိုင်ငံသည် COVID-19 ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြီးပြန်သွားသည်။
ဒူဘိုင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် ၁၄ ခုအပါအ ၀ င်ယူအေအီးသို့သွားပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် Tourism Hero သည် Senegal အားဂုဏ်ယူစေသည်
မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် ၁၂၈ ခုမြောက်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ယခု Milan Bergamo မှ Flyr နှင့် Vueling လေယာဉ်များ
စီးပွားရေးအချက်အချာအဖြစ်ကဘူးလ်လေဆိပ်မငြိမ်မသက်မှုကြောင့်ခုနစ် ဦး သေဆုံး
Vegas ကိုသွားမလား။ သင်၏မျက်နှာဖုံးများကိုထုပ်ပိုးပါ
ကယ်လီဖိုးနီယားသဲကန္တာရတွင် Super Hornet Fighter Jet ပျက်ကျ
IMEX America သည်ခရီးသွားများကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသောအမေရိကန်အားတက်သရော ...
စျေး ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးမြို့များ: ထိပ်တန်းနေရာ ၁၀ ခု ...
စပိန်တရားရုံးသည်နိုက်ကလပ် COVID Pass လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပယ်ချခဲ့သည်
St. Kitts & Nevis သည် Antigen စမ်းသပ်ရန်အတည်ပြုသည်။
မစ်ရှင်အသစ် - အာဖရိကန်အမေရိကန်များခရီးသွားခြင်းကိုမြှင့်တင်ပါ
ခရီးသွားအစီအစဉ်များ - Gen Z, Millennials နှင့် Gen X တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်နေရာ ...
COVID-19 အပေါ်ဘက်စုံခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့သည်အကျပ်အတည်း ...
စပိန်နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျတို့သည် UNWTO အတွက်ရှေ့ဆက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါ
တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စီးပျက်ကျ။ လူ ၂၁ ဦး မီးလောင်ကျွမ်း
အိန္ဒိယခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဘီလျံရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ...
TeamMATES အစီအစဉ်ကို Outback Steakhouse နှင့် ...
Nauru နှင့် Palau သမ္မတများသည် ASA အသစ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
iN2L မှရောင်း ၀ ယ်သူအသစ်ကြေငြာခဲ့သည်
အီရန်ခရီးသွားဝန်ကြီးအသစ် Hon ။ Seyed ...
၂၀၂၂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဂရက်ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်နှင့် ...